Yaa bixiyay amarka lagu eryay Wasiir Cawad ? - Jowhar somali news leader
Home NEWS Yaa bixiyay amarka lagu eryay Wasiir Cawad ?
Yaa bixiyay amarka lagu eryay Wasiir Cawad ?
Faafin degdeg ah oo caawa xilka looga qaaday wasiirkii arrimaha dibadda xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo in ku dhow saddex sano xilkan hayay ayaa dhalisay su’aalo dhowr ah oo dhammaan muujinaya khalkhalka madaxtooyada Soomaaliya ee ku aaddan xiisadda dagaal ee dalka Itoobiya gudihiisa ka aloosan.
Xog lagu kalsoon yahay oo ay Jowhar heshay ayaa sheegeysa go’aanka ka soo baxay dowladda Soomaaliya ee ku saabsan dagaalka gudaha Itoobiya, oo markii dambe dowladdu ka noqotay laga qoray unug ka shaqeeyay arrimaha dibadda oo ay madaxtooyadu si gaar u leedahay, isla markaana uu hoggaamiyo Balal Maxamed Cusmaan oo ah Wasiiru dowlaha Arrimaha Dibadda.
Previous articleMusharax Madaxweyne Daahir Maxamuud Geelle oo saaka ku soo wajahan Muqdisho
Next articleSouth Australia to end lock-in early after pizza shops “lie” to contact trackers